Gbasara Anyị - Hebei Hongqiqu New Materi Co., Ltd.
Hongqiqu New Materi Co., Ltd bụ ụlọ ọrụ aka na azụmaahịa nke onwe anyị, anyị na - azụpụta ma na - ere ahịa eserese graphite site na dayameta 150mm ruo dayameta 700mm na ọkwa RP / HP / UHP, ihe ndị na-eme ka bọmbụ dị ka blọklo, ndị ọzọ na-eme ihe nkasi. CPC / GPS agịga coke / mmanụ coke, na ihe igwe ihe igwe ihe ndị ọzọ na nkedo.
Enwere ike iji ngwaahịa anyị mee ihe maka ikpo ọkụ dị elu nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe igwe, ihe ụlọ, mmanụ ala na ihe ndị ọzọ. Anyị na-ebute ngwaahịa maka nnukwu ụlọ ọrụ China na ọrụ iwu ihe owuwu dị mkpa, dị ka BaoSteel, Aluminom Corporation nke China. N'otu oge ahụ ka ebupukwara ngwa ahịa anyị karịa obodo na mpaghara 20.
Anyị nwere usoro edo edo abụọ zuru ezu sitere na calcination ruo na machining. Ngwaọrụ ndị a gụnyere pesenti atọ dị puku atọ na narị atọ, akụrụngwa na-akwụ ọtọ, na-arụ ụlọ nwere mpịakọta anọ, ebe a na-ese ihe dị n’ime 200000KVA. Mkpọ 24 nke calciner, ahụ CNC nwere akpaka zuru oke, eriri arụmọrụ na-arụ ọrụ nhazi na iwepụ uzuzu dị elu na akụrụngwa desulfurization.